Ngaba i-Enterprise IoT iza kuyinceda iJumpstart kwiRhwebo loRhwebo? | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 16, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ababolekisi banjalo Ukuxhasa ngezimali Icandelo sele likho kwishishini lokuthengisa. IBloomberg ikwaxela kwangaphambili Ivenkile yokuThengisa ngokukhawuleza kuthi. Icandelo lezentengiso lilambile yinkqubo entsha, kwaye Internet Yezinto unokubonelela ngonyuso olufunekayo.
Ngapha koko, iipesenti ezingama-72 zabathengisi ababandakanyekayo ngoku Ishishini kwi-Intanethi lezinto (EIoT) iiprojekthi. Isiqingatha sabo bonke abathengisi sele befaka itekhnoloji yokusondela kwintengiso yabo.
Kumashishini anamhlanje, inani elinyukayo leenkqubo kunye izinto Sele zidityanisiwe okanye ngokwendalo zibonisa ukuba ziyadityaniswa. Nganye kwezi izinto Ngokwesiqhelo iya kuba ngokukodwa kumsebenzi othile, umzekelo izixhobo eziphathwayo, iimvakalelo zokuhamba, umboniso wedijithali Ukuba ezi izinto ziqhagamshelwe ukuze bakwazi ukwandisa ulwazi ngeendlela eziqhelekileyo, ivumela amashishini ukuba enze ezinye izicelo ezinyanzelayo.
Ngaba i-EIoT ilinceda njani iNtengiso yeRetail?
Izilumkiso eziselfowuni kunye nemiboniso yedijithali zezona teknoloji zikhankanyiweyo ekuhambiseni iinzame ezilungiselelwe ezivenkileni
Ngama-63% abathengi abaza kukhuphela usetyenziso lokunyaniseka, kwaye ama-57% abelane ngolwazi lwabo lobuqu kunye nophawu abaluthembileyo
I-66% yabathengi iza kusebenzisa i-Wi-Fi kwivenkile yokufumana ulwazi ngemveliso okanye ukuthatha inxaxheba kwizibonelelo ezizodwa
Ngaphezulu kwe-50% yabathengi bazimisele ukufumana izibonelelo ezilungiselelwe oko ngokusekwe kukhetho lwabo kunye nomzi mveliso wokuthenga ngelixa bekufuphi okanye kumthengisi
I-78% yabathengi ixabisa ukubaluleka kokudibanisa i-e-commerce kunye namava asesitolo njengokubaluleka kweshishini
Iipesenti ezingama-80 zeminyaka yeemillenni kunye nabathengi abanengeniso ephezulu bathi bazokuthenga ngakumbi kwiivenkile ezithengisa izixhobo ezihamba phambili ezivenkileni.
I-68% yabathengi bathenga imveliso ngenxa yokuba benomdla kwimpawu zedijithali
Le infographic evela kwiCUBE ibonelela ngemizekelo yezinto ezidityanisiweyo ze-EIoT kunye nokusetyenziswa kwindawo yokuthengisa. cube iphuhlise isixhobo esenza ukuba kube nokulungelelaniswa kunye nokusebenzisana phakathi komculo osevenkileni kunye nemiyalezo, imiqondiso yevidiyo, kunye nomculo obambeleyo.
I-infographic ikwachaza eminye yemiceli mngeni kwi-EIoT ngokunjalo, kubandakanya ukhuseleko, imfihlo, ukulungisa imiceli mngeni kunye nekhompyuter. Abathengisi mabaqwalasele le mingeni njengoko bekhetha amaqabane afanelekileyo abaza kusebenza nawo kwixa elizayo.
tags: uphawu lwe digitaleiotishishini intanethi yezintoishishini iotintanethi izintoyasebukhosi-izilumkiso eziphathwayoIvenkileintengiso yeapocolypseishishini lokuthengisaIvenkile yokuthengisaabathengisi